Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile
Usoro oge nke ihe dị n’ime ya
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 1
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 2
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 3
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 4
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 5
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 6
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 7
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 8
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 9
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 10
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 11
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 12
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 13
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 14
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 15
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 16
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 17
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 18
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 19
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 20
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 21
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 22
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 23
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 24
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 25
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 26
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 27
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 28
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 29
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 30
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 31
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 32
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 33
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 34
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 35
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 36
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 37
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 38
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 39
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 40
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 41
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 42
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 43
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 44
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 45
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 46
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 47
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 48
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 49
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 50
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 51
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 52
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 53
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 54
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 55
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 56
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 57
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 58
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 59
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 60
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 61
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 62
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 63
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 64
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 65
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 66
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 67
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 68
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 69
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 70
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 71
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 72
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 73
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 74
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 75
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 76
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 77
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 78
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 79
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 80
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 81
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 82
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 83
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 84
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 85
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 86
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 87
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 88
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 89
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 90
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 91
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 92
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 93
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 94
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 95
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 96
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 97
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 98
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 99
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 100
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 101
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 102
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 103
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 104
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 105
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 106
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 107
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 108
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 109
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 110
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 111
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 112
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 113
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 114
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 115
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 116
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 117
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 118
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 119
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 120
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 121
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 122
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 123
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 124
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 125
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 126
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 127
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 128
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 129
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 130
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 131
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 132
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 133
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 134
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 135
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 136
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 137
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile 138
Ima ọkwa nke ụlọ-ọrụ
Ima ọkwa nke ụlọ-ọrụ 1
Ima ọkwa nke ụlọ-ọrụ 2
Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile bụ nchịkọta nke mkpughe dị nsọ nile na nkwụpụta nile nke nkwalite mụọ e nyere maka nhiwe na nhazi nke ala-eze nke Chineke n’elu ụwa n’ụbọchị ndị ikpe-azụ a. Ọ bụ ezie na ọtụtụ n’ime nkeji nile bụ ndị e chere iru na ndị-otu Nzukọ nke Jisus Kraịst nke Ndị-nsọ Ụbọchị-Ikpeazụ a, ozi ya nile, ịdọ-aka-na ntị ya nile, na ịgba-ume ya nile, bụ maka uru nke ụmụ mmadụ nile ma nwekwara n’ime ya ọkpụkpọ-oku nye mmadụ nile ebe nile ka ha nụrụ olu-okwu Onye-nwe Jisus Kraịst, na-ekwuru ha n’ ihi ọdị-mma nke ụwa ha na nzọpụta ha mgbe nile na-adigide.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, mgbe e nwere ọgbakọ ọpụrụ-iche nke ndị-okenye nke Nzukọ-nsọ, e mere na Hiram, Ohio, 1 Novemba 1831 (History of the Church, 1:221–224). E nwetawo ọtụtụ mkpụghe site n’aka Onye-nwe tutu oge a, mana nchịkọta nke mkpụghe ndị a maka mbipụta n’ụdị akwụkwọ bụ otu isi-ọkwu pụtara ìhè anakweere n’ọgbakọ a. Nkeji nke a bụ okwu-mmalite nke Onye-nwe nye ozizi nile, ọgbụgba-ndụ nile, na iwu-nsọ nile e nyere ọgbọ nke ugbụ a.
Ndepụta sitere n’okwu nile nke mụọ-ozi Mononaị nye Joseph Smith Onye-amụma mgbe ọ nọ n’ime ụlọ nna nke Onye-amụma na Manchester, New York, mgbe anyasị 21 Septemba 1823 (History of the Church, 1:12). Moronaị bụrịị onye nke ikpe-azụ na ahịrị ndị ọkọ-akụkọ ndị nke mere ndekọta nke a nọ ugbụ a n’iru ụwa dịka Akwụkwọ nke Mọmọn. (Tulee Malakaị 4:5–6; na kwa nkeji nile 27:9; 110:13–16; na 128:18.)
Mkpughe e nyere Joseph Smith Onye-amụma, na Harmony, Pennsylvania Julaị 1828, maka ibe-akwụkwọ dị 116 atụgharịrị asụsụ ha furu efu sitere n’akụkụ nke mbụ nke Akwụkwọ nke Mọmọn, nke a kpọrọ akwụkwọ nke Lihaị. Onye-amụma ahụ jiiri ntamu kwere ka ibe akwụkwọ ndịa site na nchekwa ya fee n’aka Martin Harris, onye rụworo ọrụ nwoge-nta dịka onye ode-akwụkwọ na ntụgharị-asụsụ nke Akwụkwọ nke Mọmọn. E nyere mkpughe a site na Urim na Tumim (History of the Church, 1:21–23.) (Lee kwa nkeji 10.)
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma nye nna ya, Joseph Smith, Ukwụ, na Harmony, Pennsylvania, Februarị 1829 (History of the Church, 1: 28).
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, na Harmony, Pennsylvania, Maach 1829, site n’arịrịọ nke Martin Harris (History of the Church, 1:28–31).
Mkpughe e nyere Joseph Smith Onye-amụma na Oliver Cowdery, na Harmony, Pennsylvania, Epril 1829 (History of the Church, 1:32–35). Oliver Cowdery bidoro ọrụ ya dịka onye ode-akwụkwọ na ntụgharị-asụsụ nke Akwụkwọ nke Mọmọn, 7 Epril 1829 O nwetaworịị aka-ebe nke mụọ maka ezi-okwu nke ọgbụgba-ama nke onye-amụma gbasara epekele ahụ ebe akanyere ndekọta nke Akwụkwọ nke Mọmọn. Onye-amụma jụrụ Onye-nwe site na Urim na Tumim ma nweta ọzịza nkea.
Mkpughe e nyere Joseph Smith Onye-amụma na Oliver Cowdery, na Harmony, Pennsylvania, Epril 1829, mgbe ha jụrụ site na Urim na Tumim ma Jọn, onye na-eso-ụzọ ahụrụ n’anya, ma ọ dị ndụ n’anụ arụ ma-ọbụ na ọ nwụwọ. Mkpughe a bụ ntụgharị-asụsụ nke akụkọ-ndekọta Jọn dere n’akpụkpọ-anụ ọhịa ma zoo kwa ya n’onwe ya (History of the Church, 1:35–36).
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma nye Oliver Cowdery, na Harmony, Pennsylvania, Epril 1829 (History of the Church, 1:36–37). Mgbe a nọ na-atụgharị-asụsụ Akwụkwọ nke Mọmọn, Oliver, onye nọkwarịị na-arụ ọrụ dịka onye ode-akwụkwọ, na-ede mkpọpụta nke onye-amụma, chọrọ ka e nyekwasị ya onyinye nsọ nke ịtụgharị-asụsụ. Onye-nwe zaghachiri arịrịọ ya site n’inye mkpụghe nke a.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma nye Oliver Cowdery, na Harmony, Pennsylvania, Epril 1829 (History of the Church, 1:37–38). A dọrọ Oliver aka-na-ntị ka o nwee ndidi ma gbaa ya ume ka o nwee afọ-ojuju n’ide akwụkwọ, n’oge ugbụ a, mgbe onye ntụgharị-asụsụ na-akpọpụta, kama ịnwa ịtụgharị-asụsụ.
Mkpughe e nyere Joseph Smith Onye-amụma, na Harmony, Pennsylvania, na ọkọchị nke 1828 (History of the Church, 1:20–23). N’ebe a Onye-nwe na-agwa Joseph maka mgbanwe nke ndị ajọọ-mmadụ mere n’ibe-akwụkwọ 116 ahụ e jiri aka dee nke sitere na ntụgharị-asụsụ nke akwụkwọ nke Lihaị, n’ime Akwụkwọ nke Mọmọn. Ibe-akwụkwọ ndị a e dere n’aka furu ebe Martin Harris dotara ha, onye nke e nyere ibe-akwụkwọ ndị a ka o dota nwantịị oge. (Lee isi-ọkwu nke Nkeji 3.) Atụmatụ ọjọọ ahụ bụ ka e chere ntụgharị-asụsụ ọzọ a na-ele anya ya nke okwu dị n’ibe-akwụkwọ ndị ahụ e zuru-ezu ma mgbe ahụ gosi na onye ntụgharị-asụsụ amaghị ihe site n’igosi ọdịche ndị mgbanwe a butara. Na ajọọ atụmatụ a bụ nke ajọọ-onye mere ma bụrụkwa nke Onye-nwe matararịị ọbụna mgbe Mọmọn, onye-akụkọ mgbe ochie nke ndị Nifaị, naara-edeputa na nkenke epekele nile e wekọtara, bụ nke e gosiri na Akwụkwọ nke Mọmọn (lee Okwu n’ile nke Mọmọn 1:3–7).
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma nye nwanne ya nwoke Hyrum Smith, na Harmony, Pennsylvania, Mee 1829 (History of the Church, 1:39–46). A natara mkpughe nke a site na Urim na Tumim n’ọzịza nye arịrịọ na ajụjụ nke Joseph. History of the Church na-atụ ero na e nwetara mkpughe a mgbe mwetaghachi nke Ọkwa Nchụ-aja Erọn gasịrị.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma nye Joseph Knight, Ukwụ, na Harmony, Pennsylvania, Mee 1829 (History of the Church, 1:47–48). Joseph Knight kwenyere na nkwupụta nile nke Joseph Smith gbasara njide nke epekele nile nke Akwụkwọ nke Mọmọn na ọrụ nke ntụgharị-asụsụ nke na-aga n’iru mgbe ahụ ma ọtụtụ oge nye wo kwara inye-aka nke ihe onwunwe nye Joseph Smith, na onye ode-akwụkwọ ya, nke nyere aka ha ịga n’iru n’ọrụ ntụgharị-asụsụ. N’arịrịọ nke Joseph Knight, Onye-amụma chọrọ iru Onye-nwe ma nweta mkpụghe a.
Echichi nke Joseph Smith na Oliver Cowdery baa n’Ọkwa Nchụ-aja nke Erọn n’ogologo ala dị n’akụkụ Osimiri Susquehanna, n’akụkụ Harmony, Pennsylvania, 15 Mee 1829 (History of the Church, 1:39–42). Echichi nke sitere n’aka mụọ-ọzị, onye kpọrọ onwe ya otu onye ahụ akpọrọ Jọn O Me Baptism na Testament Ọhụrụ. Mụọ-ozi ahụ kọwara na ya na-arụ ọrụ sịte na-ntụzi-aka nke Pịta, Jemes na Jọn, ndị-ozi ochie, ndị jikwarịị ọtụghe-ụzọ nile nke ọkwa onye nchụ-aja di elu karịa, nke a kpọrọ Ọkwa Nchụ-aja nke Melkizedek. E kwere nkwa nye Joseph na Oliver na mgbe oge ruru na a ga-enyefe ha Ọkwa Nchụ-aja nke Melkizedek. (Lee nkeji 27: 7, 8, 12.)
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma nye David Whitmer na Fayette, New York, Jun 1829 (History of the Church, 1:48–50). Ezi na ụlọ Whitmer enwewo nnukwu nmasị na ntụgharị-asụsụ nke Akwụkwọ nke Mọmọn. Onye-amụma hiwere ebe-obibi ya n’ụlọ Peter Whitmer, Ukwu, ebe o biiri rue mgbe ọrụ ntụgharị-asụsụ gwụsịrị ma enwetakwa ikike-iwu akwụkwọ ahụ ga-abịa. Ụmụ nwoke atọ nke Whitmer, ebe nke ọbụla n’ime ha nwetaworo ọgbụgba-ama maka ezi-okwu nke ọrụ a, bịara nwee nmetụta dị omimi gbasara ọru nke onye ọbụla n’ime ha na-arụ. Mkpughe nke a na nkeji abụọ ndị na-eso (nkeji 15 na 16) ka e nyere n’ọzịza nke ajụjụ site na Urim na Tumim. David Whitmer mechara bụrụ otu n’ime Ndị-aka-ebe Atọ nye Akwụkwọ nke Mọmọn.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma nye John Whitmer na Fayette, New York, Jun 1829 (History of the Church, 1:50). (Lee isi-ọkwu nke nkeji 14.) Ozi a dị nso arụ ma na-emetụta nani onwe n’ihi na Onye-nwe na-ekwu maka ihe ya onwe ya na John Whitmer nanị matara. John Whitmer mechara bụrụ otu n’ime ndị Aka-ebe Asatọ nye Akwụkwọ nke Mọmọn.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma nye Peter Whitmer, Nta, na Fayette, New York, Jun 1829 (History of the Church, 1:51). (Lee isi-ọkwu nke nkeji 14.) Peter Whitmer, Nta, mechara bụrụ otu n’ime ndị Aka-ebe Asatọ nye Akwụkwọ nke Mọmọn.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma nye Oliver Cowdery, David Whitmer, na Martin Harris na Fayette, New York, Jun 1829, tutu ha ahụ epekele nke ihe nkanye ahụ nwere akụkọ-ndekọta Akwụkwọ nke Mọmọn (History of the Church, 1:52–57). Joseph na onye-ode akwụkwọ ya, Oliver Cowdery, amatawo site n’ọrụ ntụgharị-asụsụ nke epekele nile nke Akwụkwọ nke Mọmọn na a ga-ahọpụta ndị aka-ebe atọ pụrụ iche (Lee Ita 5:2–4; 2 Nifaị 11:3; 27:12). Oliver Cowdery, David Whitmer, na Martin Harris nwere mkpalite site n’ọchịchọ nkwalite nke mụọ ịbụ ndị aka-ebe atọ ahụ pụrụ iche. Onye-amụma jụrụ Onye-nwe, ma mkpụghe nke a bụ ọzịza sitere na Urim na Tumim.
Mkpughe nye Joseph Smith Onye-amụma, Oliver Cowdery na David Whitmer, e nyere na Fayette, New York, Jun 1829 (History of the Church, 1:60–64). Mgbe e nyefere Ọkwa Nchụ-aja nke Erọn. E kwere nkwa ịnye kwasị Ọkwa Nchụ-aja nke Melkizedek (lee isi-ọkwu nkeji 13). Na nzaghachi nye arịrịọ maka ịmata banyere okwu a, Onye-nwe nyere mkpughe nke a.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith, na Manchester, New York, Maach 1830 (History of the Church, 1: 72–74). N’ime akụkọ ya, Onye-amụma kọwara ya dịka “iwu-nsọ nke Chineke ma ọbụghị nke mmadụ, nye Martin Harris, nke e nyere ya site n’aka nke onye dị ebighi-ebi” (History of the Church, 1:72).
Mkpughe na nhazi Nzukọ-nsọ na ọchịchị, e nyere site n’aka Joseph Smith, Onye-amụma, Epril 1830 (History of the Church, 1:64–70). Tutu ya e detuo mkpughe nke a Onye-amụma dere, “Anyị natara site na Ya [Jisus Kraịst] nke a na-eso, site na mụọ nke ibu-amụma na mkpughe; nke n’enyeghị anyị nanị nnukwu akụkọ, kama gosikwa anyị ụbọchị ahụ na nke, dịka uche Ya na iwu-nsọ siri dị, anyị ga-aga n’iru ihiwe Nzukọ-nsọ Ya ọzọ n’ebe a n’elu ụwa (History of the Church, 1: 64).
Mkpughe e nyere Joseph Smith Onye-amụma, na Fayette, New York, 6 Epril 1830 (History of the Church, 1:74–79). Mkpughe nke a ka e nyere na nhiwe nke Nzukọ-nsọ n’ụbọchị a kpọrọ aha, n’ụlọ Peter Whitmer, Ụkwụ. Ndị nwoke isii, ndị mewororịị baptism sonyere. Site na-nkwekọrịta ọnụ na ntụlị-aka, ndị a gosipụtara ọchịchọ na mkpebi ha ka ehiwa, dịka ịwụ-nsọ nke Chineke (Lee Nkeji 20). Ha tulikwara aka ị nabata ma kwado Joseph Smith, nta, na Oliver Cowdery dịka ndị-ọrụ ndụzi nke Nzukọ-nsọ. Site n’ibikwasị aka n’isi Joseph chiri Oliver okenye nke Nzukọ-nsọ, ma Oliver otu aka ahụ Chikwara Joseph. Mgbe e lekotachara oriri-nsọ, Joseph na Oliver bikwasịrị aka n’isi ndị nile sonyere n’otu n’otu maka nnyefe nke Mụọ Nsọ ma n’ihi ịme ọnye-otu nke onye ọbụla dịka onye-otu nke Nzukọ-nsọ.
Mkpụghe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, na Manchester, New York, Epril 1830 (History of the Church, 1: 79–80). Mkpughe a ka e nyere nzukọ-nsọ maka ndị ụfọdụ bụ ndị emere rịị baptism chọrọ ịbata sonye na Nzukọ-nsọ na-emeghị baptism ọzọ.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, na Manchester, New York, Epril 1830, nye Oliver Cowdery; Hyrum Smith; Samuel H. Smith; Joseph Smith, Ụkwụ.; na Joseph Knight, Ụkwụ (History of the Church, 1:80). Dịka ọzịza nye ọchịchọ siri ike n’akụkụ mmadụ ise ndị a akpọrọ aha ịmata ọrụ ha n’otu n’otu, Onye-amụma jụrụ Onye-nwe ma nata mkpụghe nke a.
Mkpughe e nyere Joseph Smith Onye-amụma na Oliver Cowdery, na Harmony, Pennsylvania, Julaị 1830 (History of the Church, 1:101–103). Ọbụ e zie na odi-ala karia ọnwa anọ gasiworo site na mgbe ehiwere Nzukọ-nsọ mkpagbu bịara sie ike ma ndị ndu bidoro chọọ nchekwa mgbe ụfọdụ. Mkpụghe atọ ndị a na-eso bu ndị e nyere n’oge ndị a iji gbaa ume, janye ike, ma nye ha ndụmọdụ.
Mkpughe e nyere Joseph Smith Onye-amụma, na Harmony, Pennsylvania, Julaị 1830 (History of the Church, 1:103–104). (Lee isi-okwu nke Nkeji 24.) Mkpughe nke a gosipụtara uche nke Onye-nwe nye Emma Smith, nwunye Onye-amụma.
Mkpughe e nyere Joseph Smith Onye-amụma, Oliver Cowdary, na John Whitmer, na Harmony, Pennsylvania, Julaị 1830 (History of the Church, 1:104). (Lee isi okwu nke Nkeji 24.)
Mkpughe e nyere Joseph Smith onye-amụma, na Harmony, Pennsylvania, Ọugọst 1830 (History of the Church, 1:106–108). Na njikere maka ofufe-nro okpukpere chi ebe oriri-nsọ nke achịcha na mmanya bụ ihe a ga-eri, Joseph gara iweta mmanya. Onye ozi nke elu-igwe zutere ya, ma ọ natara mkpughe nke a, otu akụkụ ya ka e dere mgbe ahụ ma nke fọdụrụ n’ọnwa Septemba n’eso. Mmiri bụ ihe a na-eji ugbu a n’ọnọdụ mmanya na ofufe nro oriri-nsọ nile nke ndị Nzukọ-nsọ.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith onye-amụma nye Oliver Cowdery, na Fayette, New York, Septemba 1830 (History of the Church, 1:109–111). Hiram Page, onye otu Nzukọ-nsọ, nwere otu nkume ma n’ekwu na ya n’anata mkpughe nile site n’enyem-aka ya gbasara mwuli nke Zaịọn na usoro nke Nzukọ-nsọ. Ọtụtụ ndị otu abụwo ndị emegharịrị-anya site n’okwu a, ma ọbụna Oliver Cowdery ka ike si n’ime ya arụ ọrụ metutara n’ụzọ n’ezighị-ezi maka nke a. Tutu enwee ọgbakọ eyịrị-eyi, onye-amụma jiri ya kpọrọ ihe ị jụ Onye-nwe gbasara okwu a, ma mkpughe nke a sochiri.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, n’iru ndị okenye isii, na Fayette, New York, Septemba 1830 (History of the Church, 1:111–115). E nyere mkpughe a ụbọchị ole na ole tutu ọgbakọ nke bidoro na 26 Septemba 1830.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith onye-amụma nye David Whitmer, Peter Whitmer, Nta, na John Whitmer, na Fayette, New York, Septemba 1830, mgbe e mesịrị ọgbakọ ụbọchị atọ na Fayette, mana tutu ndị okenye nke Nzukọ-nsọ a nọrọ rịị iche-iche (History of the Church, 1:115–116). Na mbụ, e bipụtara ozị a dịka mkpughe atọ, emekọtara ya n’otu nkeji site n’aka Onye-amụma n’ihi ụdị mbipụta nke 1835 nke Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith onye-amụma nye Thomas B. Marsh, Septemba 1830 (History of the Church, 1:115–117). Oge ahụ bụ nke na-eso ngwa-ngwa emesịrị ọgbakọ nke nzukọ-nsọ (lee isi okwu nke Nkeji 30). Thomas B. Marsh emesịwo baptism tutu ugbu a n’ọnwa ahụ ma echiwokwa ya echichi dịka onye okenye na Nzukọ-nsọ tutu e nye mkpughe nke a.
Mpughe e nyere site n’aka Joseph Smith onye-amụma nye Parley P. Pratt na Ziba Peterson, Oktoba 1830 (History of the Church, 1:118–120). Nnukwu mmasị na ọchịchọ nile ka ndị okenye nwere maka ndị Leman, ndị Nzukọ-nsọ anụwo site n’Akwụkwọ nke Mọmọn maka ngọzi nile ekwere ha na nkwa. N’ihi nke a, ekpere ekpere ka Onye-nwe mee ka uche ya puta ìhè ma a ga-eziga ndị okenye n’oge ahụ na agbụrụ India na ọdida anyanwụ. Mkpughe a sochiri.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith onye-amụma nye Ezra Thayre na Northrop Sweet, na Fayette, New York, Oktoba 1830 (History of the Church, 1:126–127). Na-ndekọta mkpughe nke a, Onye-amụma kweyere na “Onye-nwe dị na njikere mgbe nile ịkụziri ndị na-ejisike na-achọ n’okwukwe” (History of the Church, 1:126).
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith onye-amụma nye Orson Pratt, na Fayette, New York, 4 Novemba 1830 (History of the Church, 1:127–128). Nwanne nwoke Pratt dị afọ iri na iteghete mgbe ahụ. ọbụ onye agbanwere rịị ma mee baptism mgbe mbụ ọ nụsịrị nkwusa ozi-ọma a ewetaghachịrị site n’ọnụ nwanne ya nwoke, Parley P. Pratt, izu isii gara aga. Mkpughe nke a ka anatara n’ụlọ Peter Whitmer, Ụkwụ.
Mkpughe e nyere Joseph Smith onye-amụma na Sidney Rigdon, na ma-ọbụ n’akụkụ Fayette, New York, Disemba 1830 (History of the Church, 1:128–131). N’oge a, onye-amụma nọ n’ọrụ ụbọchị nile n’ime ntụgharị nke Bible. Ntụgharị a malitere na ngwa dịka Jun 1830, ma Oliver Cowdery na John Whitmer arụwo rịị ọrụ dịka ndị ode-akwụkwọ. Ebe a kpọworo ha n’ọrụ ndị ọzọ, akpọrọ Sidney Rigdon site n’inye ọkwa nke dị nsọ ịrụ ọrụ dịka onye ode-akwụkwọ nye Onye-amụma n’ọrụ a(lee ama-okwu 20). Dịka okwu mmalite nye ndekọta ya nke mkpughe a Onye-amụma dere: “Na Disemba Sidney Rigdon biara (site na Ohio) ị jụ site n’ọnụ Onye-nwe, ya na Edward Partridge so kwa bia.… Ntakịrị oge mgbe umunna abụọ ndia rutere, nke a ka Onye-nwe kwuru” (History of the Church, 1:128).
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith onye-amụma nye Edward Partridge na-nso Fayette New York, Disemba 1830 (History of the Church, 1:131). (Lee isi-ọkwu nke nkeji 35). Onye-amụma sịrị na Edward Partridge “bụ ihe-nlere anya na okpukpere chi, na otu n’ime nnukwu mmadụ nke Onye-nwe; (History of the Church, 1:128).
Mkpughe e nyere Joseph Smith onye-amụma na Sidney Rigdon, na-nso Fayette, New York, Disemba 1830 (History of the Church, 1:139). N’ebe a ka e nyere iwu-nsọ nke mbụ gbasara mkpọkọta n’ọgbọ nke a.
Mpughe e nyere site n’aka Joseph Smith, onye-amụma, na Fayette, New York, 2 Jenuarị 1831 (History of the Church, 1:140–143). Ihe oge ya ruru bụ ọgbakọ nke nzukọ-nsọ.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma nye James Covill, na Fayette, New York, 5 Jenuarị 1831 (History of the Church, 1:143–145). James Covill, onye n’abuwo rịị onye-ozizi ozi-ọma nke ndị baptist ihe dịka afọ iri-anọ, gbara ndụ ya na Onye-nwe na ya ga-erube isi n’iwu ọbụla nke Onye-nwe ga-enye ya site na Joseph Onye-amụma.
Mkpughe e nyere Joseph Smith onye-amụma na Sidney Rigdon, na Fayette, New York, Jenuarị 1831 (History of the Church, 1:145). Tutu e nwee ndepụta nke mkpughe nke a. Onye-amụma dere “dịka James Covill jụrụ okwu nke Onye-nwe, ma laghachi soro ndị ya ochie na ụkpụrụ ha nile, Onye-nwe nyere mụ na Sidney Rigdon mkpughe nke a n’eso” (History of the Church, 1:145).
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma nye Nzukọ-nsọ, na Kirtland, Ohio, 4 Februarị 1831 (History of the Church, 1:146–147). Ngalaba Nzukọ-nsọ nọ na Kirtland n’oge nke a jiri ngwa-ngwa na-eto n’ọnu-ọgụgụ. Mgbe ọ na-ede okwu mmalite mkpughe nke a, Onye-amụma dere, “Ndị-otu nile…[ahụ] naara agba mbọ ime uche nke Chineke, ruo n’ogo nile ha matara ya, na-agbanyeghị na ụfọdụ echiche dị iche na mụọ ụgha nile egbebatawo n’etiti ha…[ma] Onye-nwe nyere Nzukọ-nsọ nke a na-eso.” (History of the Church, 1:146–147).
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma na Kirtland, Ohio, 9 Februarị 1831 (History of the Church, 1:148–154). A natara ya n’iru ndị okenye iri na abụọ ma na nmezu nke nkwa nke Onye-nwe kwere mgbe gara-aga na a ga-enye “iwu” ahụ na Ohio (lee nkeji 38:32). Onye-amụma kọwara mkpughe nke a dịka nke “jikọtara iwu nke Nzukọ-nsọ” (History of the Church, 1:148).
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, na Kirtland, Ohio, na Februarị 1831 (History of the Church, 1:154–156). N’oge nke a ụfọdụ ndị-otu nke Nzukọ-nsọ nwere nsogbu site n’aka ndị mmadụ ndị na-adọ ịbụ ndị mkpughe. Onye-amụma jụrụ Onye-nwe ma nata okwu nke a ekwuru nye ndị okenye nke Nzukọ-nsọ. Akụkụ nke mbụ na-ekwu maka ọchịchị Nzukọ-nsọ, akụkụ nke ikpe-azụ bụ ịdọ-aka-na-ntị nke ndị okenye nye mba nile nke ụwa.
Mkpughe e nyere Joseph Smith Onye-amụma na Sidney Rigdon, na Kirtland, Ohio, n’oge ikpe-azụ nke Februarị 1831 (History of the Church, 1:157). N’irube-isi n’ihe a chọrọ n’ebe a e gosịrị, Nzukọ-nsọ họpụtara ọgbakọ a ga-enwe n’ime ọnwa Jun na-abịa.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma nye Nzukọ-nsọ, na Kirtland, Ohio, 7 Maach 1831 (History of the Church, 1:158–163). Dịka okwu mmalite ya nye ndekọta nke mkpughe nke a, Onye-amụma dere na “n’oge ugbu a na ndụ nke Nzukọ-nsọ…ọtụtụ mkpesa ụgha…na akụkọ nzuzu, ka e bipụtara…ma gbasasịa,…iji gbochie ndị mmadụ site n’ịbịa inyọcha ọrụ ahụ, ma-ọbụ ịnabata okwukwe a.… Mana n’ọn̄ụ nke Ndị-nsọ nile,…a natara m nke a na-eso” (History of the Church, 1:158).
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith, Onye-amụma nye Nzukọ-nsọ, na Kirtland, Ohio, 8 Maach 1831 (History of the Church, 1:163–165). Na mbido-oge nke a nke Nzukọ-nsọ, ihe nlere anya ejikọrọ-ọnụ maka nduzi nke ofufe-nro nile nke Nzukọ-nsọ apụtabeghi. Otu o sila dị, omenala nke eji akpọbata nanị ndị-otu na ezi ndị nnyocha Nzukọ-nsọ na nzukọ oriri-nsọ nile na ọgbakọ nile ndị ọzọ nke Nzukọ-nsọ abụrụwo ihe dịka o zuru ọha. Mkpughe nke a kwupụtara ọchịchọ nke Onye-nwe gbasara ịchịkọta na idu nzukọ nile.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, na Kirtland, Ohio, 8 Maach 1831 (History of the Church, 1:166). Tutu oge a, Oliver Cowdery arụwo-ọrụ dịka onye ndekọta-akụkọ na onye-ode akwụkwọ, John Whitmer a chọbeghị ọrụ dịka onye ndekọta-akụkọ, mana, n’ihi na a rịorọ ya ka ọ rụọ n’ọkwa nke a, ọ sịrị na ya ga-erube isi n’ọchịchọ nke Onye-nwe n’okwu a. Ọ rụwọ ọrụ dịka onye ode akwụkwọ nke Onye-amụma n’idekọta ọtụtụ n’ime mkpughe nile a natara na Fayette, na mpaghara New York.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, na Kirtland, Ohio, Maach 1831 (History of the Church, 1:166–167). Onye-amụma jụrụ Onye-nwe maka ụdị usoro nke inweta ala nile maka ebe-obibi nke Ndị-nsọ. Nke a bụ kwa okwu dị mkpa site n’ife-obi nke ndị-otu Nzukọ-nsọ site n’ọwụwa anyanwụ nke United States, n’irube-isi nye iwu nke Onye-nwe ka ha gbakọọ na Ohio (lee nkeji nile 37:1–3; 45–64).
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma nye Sidney Rigdon, Parley P. Pratt na Leman Copley, na Kirtland, Ohio, Maach 1831 (History of the Church, 1:167–169). (Ụfọdụ ebe-nnweta akụkọ na-enye oge mkpughe nke a dịka Mee 1831). Leman Copley anabataworịị ozi-ọma mana kwesịe ike n’ụfọdụ nkuzi nke ndị Shaker (Otu Njikọ nke ndị Kwere na Mpụta nke Kraịst nke Ugboro Abụọ), nke ọ banyere na mbụ. Ụfọdụ okwukwe nke, ndị Shaker bụ na ọbịbịa nke ugboro abụọ nke Kraịst emezuworị ma na ọ bịara n’ụdị nke nwanyị, Ann Lee; baptism site na mmiri esoghi n’ihe agụnyere dị mkpa; iri anụ ezi bụ kwa ihe asị emela, ma ọtụtụ erikwaghị anụ ọbụla; ma ndụ alụghị nwanyị ma-ọbụ di bụ nke a sị na ọ dị elu karịa ọlụlụ di na nwunye. Mgbe ọ na-ede okwu mmalite mkpughe nke a, Onye-amụma dere, “N’ihi inwe nghọta zuru-oke karịa n’okwu nke a, a jụrụ m Onye-nwe, ma nata nke a na-eso (History of the Church, 1:167). Mkpughe ahụ gosịrị ụgha nke echiche ntọ-ala nile nke ndị otu Shaker. Ndị ụmụnne ndị ahụ a kpọrọ aha na mbụ weere otu kọpi nke mkpughe a ga-nye ndị ogbe ndị Shaker (na nso Cleveland, Ohio) ma gụọ ihe nile dị na ya nye ha, mana ha jụrụ ya.
Mkpughe e nyere Joseph Smith Onye-amụma, na Kirtland, Ohio, Mee 1831 (History of the Church, 1:170–173). Onye-amụma kwuru na ụfọdụ ndị okenye aghọtaghị ngosipụta nke mụọ dị iche-iche na mba ndị-ọzọ n’elu ụwa ma na mkpughe nke a ka e nyere n’ọzịza nye njụta ya pụrụ-iche n’okwu a. Nke a kpọrọ ihe-omume nke mụọ abụghị ihe n’adịghị n’etiti ndị-otu, ụfọdụ n’ime ha na-ekwu na ha na-enweta ọ́hụ̀ nile na mkpughe nile.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, na Thompson, Ohio, Mee 1831 (History of the Church, 1:173–174). N’oge ugbụ a Ndị-nsọ nile nọ na-efe obi site na steti ndị dị n’ọwụwa anyanwụ malitere irute Ohio, ma o wee dị mkpa ka e mee nhazi nile doro anya maka obibi ha. Dịka ọrụ nke a metụtara ọkwa-ọrụ nke ụkọchukwu, Ụkọchukwu Edward Partridge chọrọ ndụmọdụ n’okwu a, ma Onye-amụma jụrụ Onye-nwe ajụjụ.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma nye ndị-okenye nke Nzukọ-nsọ, na Kirtland, Ohio, 7th Jun 1831 (History of the Church, 1:175–179). E mewororịị ọgbakọ na Kirtland, nke malitere n’abalị atọ ma mechie n’abalị isii nke Jun. N’ọgbakọ nke a e mere ichi echichi nke mbụ pụtara-ìhè baa n’ọkwa-ọrụ nke onye isi nchụ-aja, na ụfọdụ ngosipụta nile nke mụọ ụgha na nke nduhie ka a matara ma baakwara mba.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma nye Algernon Sidney Gilbert, na Kirtland, Ohio, Jun 1831 (History of the Church, 1:179–180). Site n’arịrịọ nke Sidney Gilbert rịọrọ, Onye-amụma jụrụ Onye-nwe gbasara ọrụ na ọkwa nke Nwanne-nwoke Gilbert n’ime Nzukọ-nsọ.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma nye Newel Knight, na Kirtland, Ohio, Jun 1831 (History of the Church, 1:180–181). Ndị-otu Nzukọ-nsọ na ngalaba dị na Thompson, Ohio, nwere nkewa n’ajụjụ ndị metụtara nnyefechasị arịa nile. Ịchọ-nke onwe na oke-ọchịchọ pụtara ìhè, ma Leman Copley emebiwo ọgbụgba-ndụ ọ gbara inyefechasị nnukwu ubi ya dịka ihe-nketa nke Ndị-nsọ na-abịarute site na Colesville, New York. Ezra Thayre bịakwara daba n’ime arụmarụ ụka ahụ. N’ihi nke a, Newel Knight (onye-isi nduzi ngalaba dị na Thompson) na ndị okenye ndị ọzọ bịakwutere Onye-amụma na-ajụ otu a ga-esi aga-n’iru. Onye-amụma jụrụ Onye-nwe ma nata mkpughe nke a. (Lee nkeji 56, nke be ebe okwu a gara n’iru.)
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma nye William W. Phelps, na Kirtland, Ohio, Jun 1831 (History of the Church, 1:184–186). William W. Phelps, onye-mbipụta akwụkwọ, na ezi na n’ụlọ ya ka bịarutere na Kirtland, ma Onye-amụma jụrụ Onye-nwe banyere ya.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma na Kirtland, Ọhịo, Jun 1831 (History of the Church, 1:86–188). Ezra Thayre, onye a họpụtaworo ka ọ gaa njem ruo na Missouri ya na Thomas B. Marsh (lee nkeji 52:22), enweghị ike ịmalite n’ozi mgbasa ozi-ọma ya mgbe onye nke ikpe azụ dị na njikere. Okenye Thayre adịghị na njikere, ịgawa njem site na nsonye ya n’ime nsogbu nile dị na Thompson, Ohio, (lee isi-ọkwu nkeji 54). Onye-nwe zaghachiri ajụjụ Onye-amụma n’okwu a site n’inye mkpughe nke a.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, na Zaịọn, Ógbè Jackson, Missouri, 20 Julaị 1831 (History of the Church, 1:189–190). N’irube-isi n’iwu nke Onye-nwe (nkeji 52), ndị okenye ejewo njem site na Kirtland ruo na Missouri ma nwee ọtụtụ ihe mere ha dị iche-iche na ụfọdụ mmegide. Mgbe ọ na-eche maka ọnọdụ nke ndị Leman na enweghị mmepe-anya, ọzụzụ, na okpukpe-chi zuru ọha n’etiti ndị ahụ nile, Onye-amụma tipụrụ mkpu: “Olee mgbe ka ọzara ga-agbawa ifuru dịka rose? Olee mgbe a ga-ewulite Zaịọn elu n’ebube ya, na olee ebe temple Gị ga-eguzo, ebe mba nile ga-abịa n’ụbọchị ndị ikpe-azụ?” (History of the Church, 1:189). Na nsochi o nwetara mkpughe nke a.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, na Zaịọn, Ógbè Jackson, Missouri, 1 Ọugọst 1831 (History of the Church, 1:190–195). N’Ụbọchị izu-ike mbụ mgbe Onye-amụma na ndị-otu ya bịaruru na Ógbè Jackson, Missouri, e nwere nzukọ okpukpe-chi, ma a nabatara ndị-otu abụọ site na baptism. N’izu-ụka ahụ, ụfọdụ Ndị-nsọ sitere Colesville nke Ngalaba-nta Thompson na ndị ọzọ bịaruru ( lee nkeji 54). Ọtụtụ nwere ọnụnụ ọkụ n’obi ịmata ọchịchọ nke Onye-nwe gbasara ha n’ebe ọhụrụ nke ọgbakọ.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, na Zaịọn, Ógbè Jackson, Missouri, 7 Ọugọst 1831 (History of the Church, 1:196–201). Tutu ndekọta ya nke mkpughe nke a, Onye-amụma dere n’ụzọ nkọwa maka ala nke Zaịọn, ebe ndị mmadụ gbakọtara mgbe ahụ. E doro ala ahụ nsọ, dịka Onye-nwe tụziworo-aka, ma ebe e nwere maka temple n’ọdị n’iru ka a gọziri. Onye-nwe na-eme iwu-nsọ ndị a nke ka nke ka ọ gbasa, Ndị-nsọ nile nọ na Zaịọn.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma na Ógbè Jackson, Missouri, 8 Ọugọst 1831 (History of the Church, 1:201–202). N’oge nke a ndị-okenye ahụ ndị a họpụtara ịlaghachi ebe Ọwụwa anyanwụ chọrọ ịmata ụzọ ha ga-esi gaa na ụzọ ma n’ụdị ha kwesịrị iji gaa njem.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, n’akụkụ Osimiri Missouri, McIlwaine’s Bend, 12 Ọugọst 1831 (History of the Church, 1:202–205). Na ilọta njem ha na Kirtland, Onye-amụma na ndị okenye iri ejeworịị mgbada Osimiri Missouri n’ụgbọ. N’ụbọchị nke atọ n’ije ahụ, ọtụtụ ihe egwu nile dakwasịrị ha. Okenye William W. Phelps, n’ọ́hụ̀ nke ehihie, hụrụ onye-mbibi ahụ ka ọ na-eje n’ike n’elu iru nke mmiri nile.
Mkpụghe e nyere site n’aka Joseph Smith onye-amụma, akụkụ Osimiri Missouri na Chariton, Missouri, 13 Ọugọst 1831 (History of the Church, 1:205–206). N’ụbọchị nke a onye-amụma na ndị-otu ya, ndị nọ n’ụzọ ha site n’Independence ruo Kirtland, zutere ọtụtụ ndị-Okenye ndị nọ n’ụzọ ha ịgaru ala nke Zaịọn, na, mgbe ha kwesịrị ekele n’obi-ụtọ, nwetara mkpughe nke a.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, na Kirtland, Ohio, n’ikpe-azụ Ọugọst 1831 (History of the Church, 1:206–211). Onye-amụma, Sidney Rigdon, na Oliver Cowdery abịaruwo na Kirtland na 27 Ọugọst site na ije ha na Missouri. N’ide okwu mmalite nye ndekọta ya nke mkpughe a, Onye-amụma dere, “N’ụbọchị nile ndị a nke mmalite nke Nzukọ-nsọ, e nwere oke nchekasị-arụ inweta okwu nke Onye-nwe nye ihe nile nke metụtara nzọpụta anyị n’ụzọ ọbụla; ma dịka ala nke Zaịọn bụzi ugbụ a ihe nke ụwa kachasị mkpa nke a na-achụso, a jụrụ m Onye-nwe maka ihe ntụzi-aka ọzọ maka mkpọkọta nke Ndị-nsọ, na ịzụta ala, na okwu ndị-ọzọ” (History of the Church, 1:207).
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma nye ndị-okenye nke Nzukọ-nsọ, na Kirtland, Ohio, 11 Septemba 1831 (History of the Church, 1:211–214). Onye-amụma naara ejikere ịga Hiram, Ohio, ịmalitegharị ọrụ ya na ntụgharị-asụsụ nke Bible, nke ọ hapụrụ mgbe ọ nọ na Missouri. Otu òtù nke ụmụnne-nwoke ndị e nyeworo iwu ije na Zaịọn (Missouri) dị kwaara n’oke njikere ị pụ na Oktoba. N’oge a n’enweghị ohere ka a natara mkpughe ahụ.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, na Hiram, Ohio, Oktoba 1831 (History of the Church, 1:218). Onye-amụma kpọrọ mkpughe nke a ekpere.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith, Onye-amụma na Orange, Ohio, 25 Oktoba 1831 (History of the Church, 1:219–221). Nke a bụ ụbọchị nke mbụ nke ọgbakọ dị mkpa. N’okwu mmalite nke mkpughe a Onye-amụma dere, “N’arịrịọ nke William E. McLellin, a jụrụ m Onye-nwe, ma nata nke a na-eso” (History of the Church, 1:220).
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, na Hiram; Ohio, Novemba 1831 (History of the Church, 1:224–225). Oge ahụ bụ nke ọgbakọ pụrụ iche, ma mbipụta ahụ nke mkpughe nile anataworo n’aka Onye-nwe site n’Onye-amụma ka a tụlere ma jiri mee ihe (lee isi okwu nke nkeji 1). E kpebiri na Oliver Cowdery na John Whitmer ga-ewere ndèrè-n’aka nke mkpughe nile ahụ jee Independence, ebe W.W. Phelps ga-ebipụta ha dịka Book of Commandments (Akwụkwọ nke Iwu-nsọ nile). Ọtụtụ ụmụnne nwoke gbara ama dị mkpa na mkpụghe nile ahụ achịkọtara mgbe ahụ maka mbipụta bụ ezi-okwu n’ezie, dịka Mụọ Nsọ siri gbaa aka-ebe wụkwasị ha. Onye-amụma depụtara na mgbe a natasịrị mkpughe nke ahụ a maara dịka nkeji l, e nwetara okwu nkatọ gbasara asụsụ e jiri dee mkpughe nile ahụ. Mkpughe nke ugbụ a sochiri.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma na Hiram, Ohio, Novemba 1831, site n’arịrọ nke Orson Hyde, Luke S. Johnson, Lyman E. Johnson, na William E. McLellin (History of the Church, 1:227–229). N’agbanyeghị na e nyere mkpughe nke a na nzaghachi ekpere ka echiche nke Onye-nwe bụrụ ihe pụtara ihe gbasara ndị okenye a kpọrọ aha, ọtụtụ ihe dị n’ime ya metụtara Nzukọ-nsọ nile n’ozuzu.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, na Hiram, Ohio, Novemba 1831 (History of the Church, 1:234–235). Nchịkota nke mkpughe nile nke akwadoro maka mbipụta ọsọ-ọsọ ka a nabataworo n’ọgbakọ pụrụ iche nke 1 November. Na 3 Novemba, mkpughe nke a na-apụta ebe a dịka nkeji 133 ka e tinyere ma kpọkwa ya ihe Mgba kwụnye. Sita na nkwerịkọta nke ndị ọgbakọ, Oliver Cowdery ka a họpụtara iburu ndere na-aka nke mkpughe nile na iwu-nsọ nile a chikọtara gaa Independence, Missouri, maka mbipụta. O ga-eji kwa ego nile nke a tụkọtara maka iwuli Nzukọ-nsọ na Missouri. Ebe ụzọ ije ahụ ga-edu ya site n’otu mba ndị di-ala n’ọnụ ọgụgụ rue n’ebe mba di n’oke ala ya, onye nso m-eje ya na ya ga-eso ka-achọrọ.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith, Onye-amụma, na Kirtland, Ohio, 12 Novemba 1831 (History of the Church, 1:235–237). Akụkọ e dere site n’aka onye-amụma na-ekwu na ọgbakọ pụrụ-iche anọ ka e nwere site na 1 rue na 12 nke Novemba, sonyere. Na nke ikpe azụ n’ọgbakọ ndia, oke ịdị mkpa nke Book of Commandments (Akwụkwọ nke Iwụ-nsọ nile), nke e mesịrị kpọọ Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile, ka atulere; ma onye-amụma na-akpọ ya dịka ihe bụ ntọ-ala nke nzukọ-nsọ a n’ụbọchị ndị ikpe-azụ ndia, na ihe nrịta uru nye ụwa, na-egosi na ọtụghe ụzọ nile nke ihe omimi nile nke ala-eze nke Onye-nzọpụta anyị ka e nyefere mmadụ ọzọ (History of the Church, 1:235).
Mkpughe e nyere Joseph Smith Onye-amụma na Sidney Rigdon, na Hiram, Ohio, 1 Disemba 1831 (History of the Church, 1:238–239). Onye-amụma nọgịdere n’ịtụgharị-asụsụ nke Bible ya na Sidney Rigdon na dịka onye-ode akwụkwọ rue mgbe a natara mkpughe nke a, n’oge nke a kwusịrị nwa-oge-nta ka ha nwee ike imezu ntuzi-aka e nyere n’ebe a. Ụmụnna nwoke ga-apụ ikuzi ozi-ọma iji kwụsị mmetụta obi ọjọọ nile nke maliteworo imegide Nzukọ-nsọ maka mbipụta nke edemede n’akwụkwọ-akụkọ ụfọdụ nke Ezra Booth dere, onye nke gọnarịworo okwukwe.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, na Kirtland, Ohio, 4 Disemba 1831 (History of the Church, 1:239–241). Ọtụtụ ndị okenye na ndị-otu nile gbakọrọ ịmụta ọrụ ha ma natakwa mbulite mụọ na nkuzi nile nke Nzukọ-nsọ. Nkeji nke a bụ nchịkọta nke mkpughe abụọ a natara n’otu ụbọchị Amaokwu 1 ruo na 8 mere ka a mata ọkpụkpọ oku nke Newel K. Whitney dị ka onye ụkọchukwu. Mgbe ahụ ka a kpọrọ ya ma chie ya echichi, mgbe e mesịrị nkea ka a natara amaokwu 9 rue 26, nke na-enye ntuzi-aka agbakwunyere gbasara ọrụ nile nke onye ụkọchukwu.
Mkpughe e nyere Joseph Smith Onye-amụma na Sidney Rigdon, na Hiram, Ohio, 10 Jenuarị 1832 (History of the Church, 1:241–242). Site na oge mmalite nke Disemba gara-aga, Onye-amụma na Sidney nọgidesiri ikwusa ozi-ọma, ma site n’otu a ha rụrụ nnukwu ọrụ n’ibelata mmetụta echiche ọgbachi nke maliteworo megide nzukọ-nsọ (lee isi-ọkwu Nkeji 71).
Mkpughe e nyere Joseph Smith Onye-amụma, na Hiram, Ohio, Jenuarị 1832 (History of the Church, 1:242). Onye-amụma na-ede: “N’ịnata okwu Onye-nwe a natasịworo (OznỌd. 73), a malitere m ọzọ ịtụgharị asụsụ nke Akwụkwọ-nsọ nile, ma rụsie ọrụ ike rue mgbe ọgbakọ bịaruru nso, bụ nke a gaara-agbakọ na 25 nke Jenuarị. N’oge nkea a natakwara m ihe ndia na-eso, dịka Akwụkwọ-ozi nke Mbụ e degaara ndị Kọrịnt, isi asaa, ama okwu iri na anọ” (History of the Church, 1:242).
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, na Amherst, Ohio, 25 Jenuarị 1832 (History of the Church, 1:242–245). Oge ahụ bụ oge ọgbakọ nke e yiworo eyi. N’ọgbakọ nke a akwadoro Joseph Smith ma chiekwa ya echichi dịka Onye-isi nduzi nke Ọkwa Nchụ-aja nke dị Elu. Ụfọdụ ndị okenye, ndị nweworo ihe-isi-ike na-ime ka ndị mmadụ ghọta ozi ha, chọrọ ịmụta n’omimi karịa gbasara ihe ha ga eme dịka ọgbasara ọrụ ha nile ugbụ a. Mkpughe nke a sochiri.
Ọ́hụ̀ e nyere Joseph Smith Onye-amụma na Sidney Rigdon, na Hiram, Ohio, 16 Februarị 1832 (History of the Church, 1:245–252). Mgbe o na-ede okwu mmalite nke ndekọta ọ́hụ̀ a Onye-amụma dere “Mgbe m lọghachiri site n’ọgbakọ Amherst, a malitekwara m ntụgharị-asụsụ nke Akwụkwọ-nsọ nile. Site n’ọtụtụ mkpughe nile nke m nataworo, o doro anya na ọtụtụ akụkọ dị mkpa gbasara mgbapụta nke mmadụ, ka e wepụrụ na Bible, ma-ọbụ na o furu tutu a chikọta ya. Ọ gbara ama nke onwe ya, site n’ezi okwu nile ndị a hapụrụ, na ọbụrụ na Chineke na-akwụghachi onye ọbụla ụgwọ-ọrụ ya nile dika ihe ndị e mere na arụ siri dị, ebe ahụ bụ ‘Elu-igwe’, dịka akwadoro ya ịbụ ụlọ ebe-obibi ebighi-ebi nke Ndị-nsọ, garịrị ịgụnye ala-eze karịrị otu. Maka nke a,…dịka a na-atụgharị Ozi-ọma nke Jọn Onye-nsọ, mụ onwe m na Okenye Rigdon hụrụ ọ́hụ̀ nke a na-eso”. (History of the Church, 1:245), Ọ bụ mgbe Onye-amụma tụgharịsịworo Jọn 5:29 ka e nyere ọ́hụ̀ nke a.
Mkpughe e nyere Joseph Smith Onye-amụma, na Hiram, Ohio, Maach 1832 (History of the Church, 1:253–255). Onye-amụma dere, Gbasara ntụgharị-asụsụ nke Akwụkwọ-nsọ nile, a natara m nkowa nke a maka Mkpughe nke Jọn Onye-Nsọ (History of the Church, 1:253).
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, na Hiram, Ohio, Maach 1832 (History of the Church, 1:255–257). Usoro ahụ Onye-nwe nyere Joseph Smith maka nzube ihiwe ụlọ-akụ maka ndị ogbenye. Ọbụghị ihe a chọrọ oge nile ka e jiri-mara nke ndị mmadụ ahụ Onye-nwe kwusaara okwu na mkpughe nile bụrụ ihe ụwa ga-amata; ya mere, na mbipụta nkea ma n’ụfọdụ mkpughe ndị na-eso ụmụnne nwoke ka a kpọrọ aha ọzọ n’abụghị nke ha. Mgbe mkpa gafere maka idebe aha ha na nzuzo, ezigbo aha ka e mesịrị nye n’akara mkpuchi nile. Ebe a n’enweghi mkpa pụtara ìhè taa ịgan’iru n’inye aha ndị a pụrụ-iche, ezigbo aha ha nanị ka a na-eji ugbụ a n’ebe a dịka e nyere ya na ndepụta nke mbụ.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, na Hiram, Ohio, Maach 1832 (History of the Church 1:257).
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, na Hiram, Ohio, Maach 1832 (History of the Church, 1:257–258). Frederick G. Williams ka a kpọrọ ka ọ bụrụ onye isi nchụ-aja na onye-ndụmọdụ n’Otu ndị-isi nduzi nke Ọkwa Nchụ-aja Dị Elu. Akụkọ ndekọta nile gosịrị na mgbe a natara mkpughe nke a na Maach 1832, ọ kpọrọ Jesse Gause n’ọkwa-ọrụ nke onye-ndụmọdụ nke Joseph Smith n’Ọtụ ndị-isi nduzi. Otu ọ dị, mgbe ọ jụrụ ị gan’iru n’ụzọ kwesịrị n’ọrụ nke a, ọkpụkpọ-oku ahụ ka e mesịrị nyefee Frederick G. Williams. Mkpughe ahụ (e nyere oge ya ka Maach 1832) ka e kwesịrị iwere dịka otu nzọ-ụkwụ chere iru n’ezi nhazi nke Otu Ndị-isi Nduzi Mbụ, ịkpọ-aha kpọm-kwem maka ọkwa-ọrụ nke onye-ndụmọdụ n’òtù ahụ ma na-akọwa ùgwù nke nhọpụta n’ọkwa-ọrụ ahụ Nwanne-nwoke Gause rụtụrụ nwa-oge mana a chụpụrụ ya site na Nzukọ-nsọ na Disemba 1832. Nwanne-nwoke Williams ka e chiri echichi baa n’ọkwa-ọrụ ahụ a kpọrọ aha na 18 Maach 1833.
Mkpughe e nyere Joseph Smith Onye-amụma, na Ógbè Jackson, Missouri, 26 Epril 1832 (History of the Church, 1: 267–269). Oge ahụ bụ kansụl ọha nke Nzukọ-nsọ ebe a nọ họpụta Joseph Smith Onye-amụma dịka Onye-isi nduzi nke Ọkwa Nchụ-aja dị Elu, n’ọkwa-ọrụ nke e chiworo ya rịị echichi ya n’oge gara-aga, n’ọgbakọ nke ndị-isi-nchụ-aja, okenye, na ndị-otu, na Amherst, Ohio, 25 Jenuarị 1832 (lee isi-ọkwu nke nkeji 75). N’oge mbụ, aha n’abụghị nke eji mara mmadụ ka eji na mbipụta nke mkpughe nke a iji zoo ejiri-mara nke ndị mmadụ a kpọrọ aha (lee isi-ọkwu nke nkeji 78).
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, na Independence, Missouri, 30 Epril 1832 (History of the Church, 1:269–270). Mkpughe nke a ka a natara dịka Onye-amụma na ụmụnna ya ndị nwoke nọ na kansụl.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, na Kirtland, Ohio, 22 na 23 Septemba 1832 (History of the Church, 1:286–295). N’ọnwa nke Septemba, ndị okenye maliteworo ịlọta site na mgbasa ozi-ọma ha nile na steti ndị dị n’ọwụwa anyanwụ na inye nguzi maka ọrụ ha nile. Ọ bụ mgbe ha nọkọtara ọnụ n’oge nke obi-ụtọ a ka a natara ozi nke a. Onye-amụma kpọrọ ya mkpughe n’ọkwa nchụ-aja.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, na Kirtland, Ohio, 27 Novemba 1832 (History of the Church, 1:298–299). Nkeji nke a bụ ihe e depụtara site n’akwụkwọ-ozi nke Onye-amụma degara W.W. Phelps, onye bi na Independence, Missouri. E nyere ya iji zaa ajụjụ nile gbasara Ndị-nsọ ndị ahụ kwapụrụ gaa Zaịọn mana ndị n’enwetabeghi ihe-nketa dịka usoro e hiwere n’ime Nzukọ-nsọ.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith, Onye-amụma, na Kirtland, Ohio, 6 Disemba 1832 (History of the Church, 1:300). Mkpughe nke a ka a natara mgbe Onye-amụma nọ na-elegharị ma na-ahazi akwụkwọ nke e dere n’aka nke ntụgharị-asụsụ nke Bible.
Mkpughe na ibu amụma banyere agha, e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, 25 Disemba 1832 (History of the Church, 1:301–302). Nkeji nke a ka a natara n’oge mgbe ụmụnne nwoke nọ na-eche echiche ma na-atụgharị uche gbasara ịgba oru nke ndị Afrika na kọntinent Amerika na ịgba oru nke ụmụ nke mmadụ n’elu ụwa nile.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma na Kirtland, Ohio, 27 Disemba, 1832 (History of the Church, 1:302–312). A kpọrọ ya site n’aka Onye-amụma dịka “akwụkwọ olive” aghọtara site n’Osisi nke Paradaịs, ozi udo nke Onye-nwe nyere anyị“ (History of the Church, 1:316). Ọ na-egosipụta site n’akụkọ-ndekọta nile na akụkụ ụfọdụ sitere na mkpughe nke a bụ ndị a natara na 27 ma na 28 Disemba 1832 ma na 3 Jenuarị 1833.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, na Kirtland, Ohio, 27 Februarị 1833 (History of the Church, 1:327–329). Maka ụmụ nna nwoke ndị mbụ na-an̄ụ anwụrụ n’ọgbakọ ha nile, Onye-amụma ka e duuru ịtụgharị uche maka ihe ahụ; site na nke a, ọ jụrụ Onye-nwe gbasara ya. Mkpughe nke a, nke a matara dịka Okwu nke Amamihe, bụ nsonazụ ya. Ama-okwu atọ ndị mbụ ka e dere na mbụ dịka okwu mmalite na nkọwa ka Onye-amụma nwetara site na nkwalite nke mụọ.
Mkpughe e nyere Joseph Smith Onye-amụma, e nyere na Kirtland, Ohio, 8 Maach 1833 (History of the Church, 1:329–331). Mkpughe nke a bụ nzọ ụkwụ ịga-n’iru n’ihiwe Otu Ndị-isi Nduzi Mbụ (lee isi-ọkwu nke nkeji 81); n’ihi nke a, ndị ndụmọdụ ahụ e kwuru ka e chiri echichi na 18 Maach 1833.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, na Kirtland, Ohio, 9 Maach 1833 (History of the Church, 1:331–332) Onye-amụma nọ n’oge ahụ na-atụgharị Testament Ochie ebe ọ bịarụworo n’akụkụ nke edemede nile ndị ochie a na-akpọ Apọkrịfa, ọ jụrụ Onye-nwe ma nata ntuzi-aka nke a—
Mkpughe e nyere Joseph Smith Onye-amụma na Kirtland, Ohio, 15 Maach 1833 (History of the Church, 1:333). Mkpughe nke a ka e lekwasịrị Frederick G. Williams anya, onye nke a họpụtaworo nso nso dịka onye ndụmọdụ n’ime Otu Ndị-isi Nduzi Mbụ.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, na Kirtland, Ohio, 6 Mee 1833 (History of the Church, 1:343–346).
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, na Kirtland, Ohio, 6 Mee 1833 (History of the Church, 1:346–347). Hyrum Smith, Reynolds Cahoon na Jared Carter ka a họpụtara dịka kọmiti na-ewu ụlọ nzukọ-nsọ.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, na Kirtland, Ohio, 1 Jun 1833 (History of the Church, 1:350–352). Mkpughe nke bụ ịga-n’iru nke ntụzi-aka dị nsọ dịka iwu ụlọ nile maka ofufe na ndụmọdụ, nke ka nke ụlọ nke Onye-nwe (lee nkeji 88:119–136 na nkeji 94)
Mkpughe e nyere Joseph Smith Onye-amụma, na-egosi usoro nke nnukwu obodo ma-ọbụ stek nke Zaịọn dị na Kirtland, Ọhịọ, 4 Jun 1833, dịka ihe atụ nye Ndị-nsọ nọ na Kirtland (History of the Church, 1:352–353). Oge a bụụrụ n’ọgbakọ nke ndị-isi-nchụ-aja, ma ihe kachasị mkpa a na-elebara anya bụ okike nke ụfọdụ ala, nke ihe eji mara ya bụ ubi nke French, nke ndị Nzukọ-nsọ nwetara nsonso Kirtland. Ebe ọgbakọ ahụ enweghi ike inwe nkwekọrịta maka onye ga-elekọta ubi ahụ anya, mmadụ nile kwekọtara ịjụ Onye-nwe gbasara okwu ahụ.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, na Kirtland, Ohio, 2 Ọugọst 1833 (History of the Church, 1:400–402). Mkpughe nke a metụtara nke ka nke ihe gbasara Ndị-nsọ nọ na Zaịọn, Ógbè Jackson, Missouri, n’ọzịza nye ajụjụ Onye-amụma jụrụ Onye-nwe ihe ọ ga-eme. Ndị-otu Nzukọ-nsọ nọ na Missouri nọ n’oge a n’okpuru mkpagbu dị-ike ma, n’ụbọchị 23 Julaị 1833, a manyewo ha itinye-aka n’akwụkwọ nkwekọrịta ịhapụ Ógbè Jackson.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, na Kirtland, Ohio, 6 Ọugọst 1833 (History of the Church, 1:403–406). Mkpughe nke a bịara na nsochi nke mkpagbu nke Ndị-nsọ nọ na Missouri. Ọ bụ usoro ụdị okike na Ndị-nsọ nọ na Missouri, ebe ha tasịworo ahụhụ nke anụ arụ ma tufuo kwa arịa-ụlọ ha, ga-enwe mmetụta nke imegwara na ịbọ-ọbọ. Ya mere, Onye-nwe nyere mkpughe nke a. N’agbanyeghị na ụfọdụ akụkọ nke nsogbu nile dị na Missouri n’ezie erutawo Onye-amụma na Kirtland (ebe ruru-mailụ narị itolu), ịdị ọjọọ nke ọnọdụ ahụ bụ ihe ọ gaara amata n’oge a nanị site na mkpughe.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma nye John Murdock, Ọugọst 1832, na Hiram, Ohio. N’agbanyeghị na mbipụta nile nke Ozizi na Ọgbụgba-ndụ nile malite na 1876 e depụtawo mkpughe nke a dịka Kirtland, Ọugọst 1833, mbipụta ndị mbụ na akwụkwọ ndekọta akụkọ nile na-emesi-ike nye ozi nke bụ ezie.
Mkpughe e nyere Joseph Smith Onye-amụma na Sidney Rigdon, na Perrysburg, New York, 12 Oktoba 1833 (History of the Church, 1:416, 419–421). Ụmụnne ndị nwoke abụọ ahụ, ebe ha nọworo ọtụtụ ụbọchị ha hapụrụ ezi na ụlọ ha nile, nwere mmetụta maka ha.
Mkpughe e nyere Joseph Smith Onye-amụma, na Kirtland, Ohio, 16 Disemba 1833 (History of the Church, 1:458–464). N’oge nke a, ndị nsọ ndị gbakọworo na Missouri nọ na-ata ahụhụ oke mkpagbu. Ndị Ọgba-aghara a chụpụwo ha site n’ebe obibi ha nile na Ógbè Jackson; ma ụfọdụ ndị nsọ ahụ achọwo ihiwe onwe ha na Ógbè Van Buren, mana mkpagbu sochiri ha. Isi Ọgbakọ nke Ndị-nsọ n’oge ahụ di na Ógbè Clay, Missouri. Mmaja-ọnwụ megide ndị otu nke Nzukọ-nsọ kariri akarị. Ndị mmadụ tufuru ngwo-ngwo ụlọ ha nile, uwe, anụ-ụlọ ha nile, na arịa nke aka ha ndị ọzọ ebe ebibisiri mkpụrụ akụkụ ha nile.
Usoro eji nwee nzukọ nke nhazi nke otu kansụl dị elu nke nzukọ-nsọ, na Kirtland, Ohio, 17 Februarị 1834 (History of the Church, 2:28–31). Usoro eji nwee nzukọ nke mbụ ka ndị okenye Oliver Cowdery na Orson Hyde depụtara. Mgbe ụbọchị abụọ gasiri, usoro ahụ ejiri nwee nzukọ ka onye-amụma meziri, a gụpụtara ya nye ndị otu kansụl dị elu, ma ndị kansụl nabatara ya. Ama-okwu iri atọ (30) ruo iri atọ na abụọ (32), ebe metụtara Kansụl nke Ndị-ozi Iri na Abụọ, ka Onye-amụma Joseph Smith tinyere na 1835 mgbe ọ kwadoro nkeji nke a maka mbipụta n’ime Ozizi na Ọgbụgba Ndụ nile.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith onye-amụma, na Kirtland, Ohio, 24 Februarị 1834 (History of the Church, 2:36–39). Mkpughe nke a bụ nke enwetara mgbe Parley P. Pratt na Lyman Wight bịarutesịrị na Kirtland, Ohio, ndị sitere Missouri bịa ị nụrụ ndụmọdụ onye-amụma maka enyem-aka na ndozigharị nke Ndị-nsọ n’ala ha nile na Ógbè Jackson.
Mkpughe e nyere Joseph Smith Onye-amụma, 23 Epril 1834, gbasara usoro njikọta ọnụ, ma-ọbụ otu nke nzukọ-nsọ maka ọdinma nke ndị ogbenye (History of the Church, 2:54–60). Oge ahụ bụ nke ọgbakọ kansụl nke Otu Ndị-isi Nduzi Mbụ na ndị isi nchụ-aja ndị ọzọ ebe elebara anya na mkpa nke arụ dagidere ndị mmadụ. Otu Njikọ aka ọnụ ahụ dị na Kirtland ka aga ekposa nwaoge ma hazigharịa, na arịa nile dịka ọkwa ọrụ nile bụ nke a ga-eke n’etiti ndị otu nile.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma na Osimiri Fishing, Missouri, 22 Jun 1834 (History of the Church, 2:108–111). Otu ọgba-aghara ike megide Ndị nsọ nile nọ na Missouri na-abawanye, ma ọtụtụ otu ahaziri sitere n’ọtụtụ ogbe amawori ọkwa echiche ha ibibi ndị ahụ. Onye-amụma abịawo site na Kirtland duru ndị otu anakpọ ebe Izu-ike nke Zaịọn, na-eweta uwe na ihe ndị ọzọ. Mgbe otu a bịara nọrọ na Osimiri Fishing, Onye-amụma natara mkpughe a.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, na Kirtland, Ohio, 25 Novemba 1834 (History of the Church, 2:170–171). Mkpughe nke a ka enyere maka Warren A. Cowdery, Onye bụ nwanne nwoke okenye nke Oliver Cowdery.
Mkpughe maka ọkwa nchụ-aja, e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, na Kirtland, Ohio, n’ụbọchị 28 Maach 1835 (History of the Church, 2:209–217). N’ụbọchị a akpọrọ aha, Iri na Abuọ ahụ zukọrọ na kansụl, na-ekwupụta na otu na otu adịgh-ike ha na a maghị-eme nile, na-ekwupụta nchegharị na na-achọ nduzi-ọzọ nke Onye-nwe. Ha chọọrọ ịgbasa gawa izisa ozi-ọma ebe nile ezigara ha. Ọbụ ezie na ufọdụ akụkụ na nkeji nke a ka anatara n’ụbọchị a akpọrọ aha, akụkọ ndekọta nile gosiri na ụfọdụ akụkụ ndị ọzọ ka-anatara n’oge dị iche-iche, ụfọdụ n’oge dịka mbido Novemba 1831.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, na Kirtland, Ohio, 20 Disemba 1835 (History of the Church, 2:345). A natara nkeji nke a site n’arịrịọ nke Lyman Sherman, onye echiri onye isi nchụ-aja na otu onye iri asaa na mbụ, na onye bịakutere onye-amụma ịrịọ arirịọ maka mkpughe ime ka a mara ọrụ ya.
Ekpere ekpere na emume e ji rara Temple Kirtland, Ohio, nye Chineke na 27 Maach 1836 (History of the Church, 2:420–426). Dịka nkọwasi nke Onye-amụma dere, ekpere nke-a ka e nyere ya site na mkpughe.
Ọ́hụ̀ nile e gosipụtara nye Joseph Smith Onye-amụma na Oliver Cowdery n’ime Temple nọ na Kirtland, Ohio, 3 Epril 1836 (History of the Church, 2:435–436). Oge ahụ bụ nke nzukọ ụbọchị izu ike. Onye-amụma n’okwu nkọwa ndekọta nke ngosipụta nile a jiri okwu ndị a: “Na ehihie, e nyeere m Ndị-isi Nduzi ndị ọzọ a aka n’ikesasị oriri-nsọ nye nzukọ-nsọ, na-anata ya site n’aka Iri na Abụọ ahụ, ndị ọbụ ohere ha iduzi n’oche-nsọ n’ụbọchị nke a. Mgbe m rụsịrị ọrụ nke a nye ụmụnna m, a laghachiri m na pulpit, ebe emechikwara, akwa-mgbochi na hudata isi m, mụ na Oliver Cowdery, na ekpere ịda jụụ na nke ime-obi. Mgbe anyị bilitere n’ekpere, ọhụ nke a na-eso ka emeghere nye anyị abụọ” (History of the Church, 2:435).
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, na Salem, Massachusetts, 6 Ọugọst 1836 (History of the Church, 2:465–466). N’oge nkea ndị ndu nke Nzukọ-nsọ ji nnukwu ụgwọ n’ihi ọrụ ha nile n’ịgbasa-ozi. Mgbe ha nụrụ na nnukwu ego ga-erute ha aka na Salem, Onye-amụma, Sidney Rigdon, Hyrum Smith, na Oliver Cowdery garuru ebe ahụ site na Kirtland, Ohio, iji chọpụta ihe nke a, ya na ikwusa ozi-ọma. Ụmụnna ahụ rụrụ ọtụtụ ihe na ọrụ nke Nzukọ-nsọ na kwusaa kwa ozi-ọma. Mgbe o doro-anya na o nweghị ego gaje ịpụta, ha lọghachiri na Kirtland. Ọtụtụ ihe pụtara íhè n’ebe ahụ ka e gosipụtara na mkpụrụ okwu nke mkpughe nke a.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma rute Thomas B. Marsh, na Kirtland, Ohio, 23 Julaị 1837 (History of the Church, 2:499–501). Mkpughe nke a nwere okwu nke Onye-nwe nye Thomas B. Marsh gbasara ndị-ozi iri na abụọ nke Nwa-atụrụ ahụ. Onye-amụma dere na a natara mkpughe nke a n’ụbọchị ekwusara ozi-ọma mbụ na England. Thomas B. Marsh bụ n’oge nke a Onye-isi nduzi nke ndị Ọnụ-ọgụgụ-juru-aka nke Ndị-ozi Iri na Abụọ ahụ.
Aziza nile nye ụfọdụ ajụjụ na edemede nile nke Aịsaịa, nke Joseph Smith Onye-amụma, nyere, Maach 1838 (History of the Church, 3:9–10).
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, na Far West, Missouri, 17 Epril 1838 (History of the Church, 3:23).
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma na Far West, Missouri, 26 Epril 1838, n’eme ka-amara uche nke Chineke gbasara iwulite ebe ahụ na kwa ulọ nke Onye-nwe (History of the Church, 3:23–25). Mkpughe nke a ka e nyere ndị-ọrụ nduzi nile nke Nzukọ-nsọ.
Mkpughe e nyere Joseph Smith Onye-amụma, na nso Wight’s Ferry, n’ebe a nakpọ Spring Hill, Ógbè Daviess, Missouri, 19 Mee 1838 (History of the Church, 3:35).
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, na Far West, Missouri, 8 Julaị 1838, gbasara ọru nile nke ugbua nke William Marks, Newel K. Whitney, na Oliver Granger (History of the Church, 3:45–46).
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, na Far West, Missouri, 8 Julaị 1838, na nzaghachi nye arịrịọ, “Gosi anyị uche gị, O Onye-nwe, gbasara Iri na Abụọ ahụ (History of the Church, 3:46).
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, na Far West, Missouri, 8 Julaị 1838, na ọziza nye arịrịọ ya: “O Onye-nwe! Gosi nwa odibọ gị ihe bu ihe i chọrọ site na arịa nile nke ndị gị maka ikwu otu-ụzọ-n’ụzọ iri” (History of the Church, 3:44). Iwu nke otu ụzọ n’ụzọ iri dịka aghọtara taa, ka n’enyebeghi nzukọ-nsọ tutu mkpughe nke a. Okwu ahụ otu ụzọ n’ụzọ iri n’ekpere nke a ekwuru maka ya na mkpughe ndị ochie nile (64:23; 85:3; 97:11) apụtaghi nani otu ụzọ n’uzọ iri, mana onyinye afọ ofufe nile, ma-ọbụ ụtụ nile, atụnyere na akpa nzukọ-nsọ. Onye-nwe e nyewo nzukọ-nsọ na mbụ iwu nke inyefechasị na ngụzi ije-ozị nke arịa, nke ndị otu (nke ka nke ndị ndu ndị okenye) bara nime ya site na ọgbụgba-ndụ nke g’adị ruo mgbe nile na-adigide. N’ihi ọtụtụ enweghị ike imezu ọgbụgba ndụ nke a, Onye-nwe weghachiri ya na oge ahụ na nye n’ọnọdu ya iwu nke otu ụzọ n’ụzọ iri maka Nzukọ-nsọ nile. Onye-amụma jụrụ Onye-nwe ụzọ ole n’aria ụlọ ha ka a chọrọ maka ihe nile dị-nsọ. Aziza ya bụ mkpughe nke a.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma na Far West, Missouri, 8 Julaị 1838, ikwupụta nkesasị nke arịa nile nke atụrụ n’otu ụzọ n’ụzọ iri dịka akpọrọ ya aha na mkpughe nke a na-eso, nkeji 119 (History of the Church, 3:44).
Ekpere na ibu-amụma nile nke Joseph Smith Onye-amụma dere mgbe ọ bụ Onye-mkpọrọ n’ulọ mkpọrọ nọ na Liberty, Missouri, e nyere oge ya ka 20 Maach 1839 (History of the Church, 3:289–300). Onye-amụma na ufọdụ ndị-n’eso ya anọwo ọtụtụ ọnwa n’ime ụlọ mkpọrọ. Akwụkwọ maka ikpe mkpegharị na arịrịọ nile ha nke e nyere ndị-ọrụ ọchịchị na ndị ngalaba-ikpe enwegh-ike iwetara ha enyem-aka.
Okwu nke Onye-nwe nye Joseph Smith Onye-amụma, mgbe ọ bụ onye-mkpọrọ na ụlọ-mkpọrọ nọ na Liberty, Missouri, Maach 1839 (History of the Church, 3:300–301).
Ọrụ nke Ndị-nsọ gbasara ndị na-esogbu ha nke e wepụtara site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, mgbe ọ bụ onye-mkpọrọ na ụlọ-mkpọrọ Liberty, Missouri, Maach 1839 (History of the Church, 3:302–303).
Mkpughe e nyere Joseph Smith Onye-amụma, na Nauvoo, Illinois, 19 Jenuarị 1841 (History of the Church, 4:274–286). N’ihi mbawanye nke mkpagbu na usọrọ nile, ịwụ n’akwadoghi megide ha site n’aka ndị-ọrụ ọha-na-eze, ndị nsọ abụrụwo ndị akwagidere ịhapụ Missouri, iwu-nke-mkpochapụ bụ nke Lilburn W. Boggs, onye na-achị ala nke Missouri nyere, nke enyere oge ya ka 27 Oktoba 1838, mere ha enweghị ohere nhọrọ-ozo (History of the Church, 3:175). Na 1841, mgbe e nyere mkpughe nke a, obodo ukwu nke Nauvoo, nke nọọrọ ebe ọnụmara ahụ a na-akpọ Commerce, Illinois, bụ nke ndị nsọ wuworo, na ebe a ka ehiwere isi ụlo-ọrụ nke Nzukọ-nsọ.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, na Nauvoo, Illinois, Maach 1841, gbasara Ndị-nsọ na mpaghara nke Iowa (History of the Church, 4:311–312).
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, n’ụlọ nke Brigham Young; na Nauvoo, Illinois, 9 Julaị 1841 (History of the Church, 4:382). N’oge nke a Brigham Young bụ Onye-isi nduzi nke Ọnụ-ọgụgụ-juru-aka nke Ndị-ozi Iri na Abụọ ahụ.
Akwụkwọ sitere n’aka Joseph Smith Onye-amụma nye Ndị-nsọ nile nke ugbua nọ na Nauvoo, Illinois, nke jikọtara ntụzi-aka nile gbasara baptism maka ndị nwụrụ-anwụ, enyere oge ya na Nauvoo, 1 Septemba 1842 (History of the Church, 5:142–144).
Akwụkwọ-ozi sitere n’aka Joseph Smith Onye-amụma nye Nzukọ-nsọ nke Jisus Kraịst nke Ndị-nsọ Ụbọchị-Ikpeazụ a, na-enwe ntụzi-aka ndị-ọzọ gbasara baptism maka ndị nwụrụ-anwụ, enyere ụbọchị ya na Nauvoo, Illinois, 6 Septemba 1842 (History of the Church, 5:148–153).
Ndụmọdụ nile sitere n’aka Joseph Smith Onye-amụma, na Nauvoo, Illinois, 9 Februarị 1843, nke kọwara ọtụghe-ụzọ atọ pụrụ-iche e ji-egosi ihe di iche n’ezi udị okike nke mụọ-ozị nile na-ekwusa ozi na mụọ nile (History of the Church, 5:267).
Okwu nile nke ndụmọdụ sitere n’aka Joseph Smith Onye-amụma, na Ramus, Illinois, 2 Epril 1843 (History of the Church, 5:323–325).
Ndụmọdụ nile sitere n’aka Joseph Smith Onye-amụma, e nyere na Ramus, Illinois, 16 na 17 Mee 1843 (History of the Church, 5:392–393).
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith Onye-amụma, na Nauvoo, Illinois, e dekọtara ya na 12 Julaị 1843, gbasara ọgbụgba-ndụ ọhụrụ na mgbe nile na-adigide, tinyere ọgbụgba ndụ mgbe ebighi-ebi nke ọlụlụ di na nwunye, na kwa ịlụ ọtụtụ nwunye (History of the Church, 5:501–507). Ọ bụ ezịe na e depụtara mkpughe ahụ na 1843, ọ pụtara ihe site n’akụkọ ndepụta nile na ozizi nile na ukpụrụ nile nke nọ n’ime mkpughe nke a ka Onye-amụma matawororịị site ke mgbe 1831.
Mkpughe e nyere site n’aka Joseph Smith, Onye-amụma na Hiram, Ohio, 3 Novemba 1831 (History of the Church, 1:229–234). N’okwu mmalite mkpughe nke a Onye-amụma dere, ’’N’oge nke a ọtụtụ ihe dị nke ndị Okenye nile nwere mmasị ịmata banyere izisa Ozi-ọma nye ndị nile bi n’ime ụwa, na gbasara mkpọkọta ahụ n’usoro ije ije n’ime ezi ìhè ahụ, na nweta ndụmọdụ nke si n’elu, na 3 Novemba, 1831, achọwo m n’aka Onye-nwe na nweta mkpughe nke a dị mkpa na-eso’’ (History of the Church, 1:229). Nkeji nke a ka e buru ụzọ tinye n’akwụkwọ Ozizi na Ọgbụgba ndụ nile dịka nso n’azụ na e mesịa nye ya ọnụ ọgụgụ nkeji.
Nkwupụta nke ihe e kweere gbasara ọchịchị nile nke obodo na iwu nile n’ọha, a nabatara site na ntuli aka nwere nkwado nke mmadụ nile, na ọgbakọ ọha nke Nzukọ nsọ e mere na Kirtland, Ohio, 17 Ọugọst 1835 (History of the Church, 2:247–249). Oge ahụ bụ ọgbakọ nke ndị ndu nile nke Nzukọ nsọ, ndị a kpọkọtara itule ihe nile a chọrọ ka-atunye uche dị n’ime mbipụta nke mbụ nke Ozizi na Ọgbụgba ndụ nile. N’oge ahụ, nkwupụta nke a ka-enyere mmalite okwu ndịa na-eso: ’’Ka ihe anyị kwenyere gbasara ọchịchị nile nke ụwa na ọha iwu nile ghara inwe nkọwahie ma-ọbụ nghọtahie, anyị echewo na o kwesịrị ekwesị i wepụta na-ọgwụgwụ nke akwụkwọ nke a, ebum n’uche anyị gbasara nke a (History of the Church, 2:247).
Ogbugbu n’ihi ihe ha kweere e gburu Joseph Smith Onye-amụma na nwanne ya nwoke, Hyrum Smith Onye isi ezi na ụlọ, na Carthage, Illinois, 27 Jun 1844 (History of the Church, 6:629–631). Akwụkwọ nke a ka Okenye John Taylor nke Kansụl nke Iri na Abụọ dere, onye bụ onye akaebe nye ihe nile mere.
Okwu ahụ na uche obi nke Onye-nwe e nyere site n’aka Onye-isi nduzi Brigham Young, na Winter Quarters, ebe izu-ike nke Israel, mba Ọmaha, n’akụkụ ọdịda anyanwụ Osimiri Missouri nke dị nso Council Bluffs, Iowa (Journal History of the Church [Akụkọ Ndepụta Akwụkwọ Ọgụgụ nke Nzukọ-nsọ], 14 Jenuarị 1847).
Ọ́hụ̀ e nyere Joseph Smith Onye-amụma n’ime temple na Kirtland, Ohio, 21 Jenuarị 1836 (History of the Church, 2:380–381). Oge ahụ bụụrụ nleba anya nke emume-nsọ nile nke onyinye nsọ dịka e kpugheworo ha.
Ọ́hụ̀ e nyere Onye-isi nduzi Joseph F. Smith na Salt Lake City, Utah, na 3 Oktoba 1918. N’okwu mmeghe ya na Ọgbakọ Ntụgharịkọta uche zuru ọha mpaghara afọ 89 nke Nzukọ-nsọ; na 4 Oktoba 1918, Onye-isi nduzi Smith kwupụtara sị na ya enwetawo ọtụtụ mkpanye ụka ozi nile sitere na Chineke n’ime ọnwa nile ndị gara aga. Otu n’ime ndị a gbasara ngaru nleta nke Onye nzọpụta nye mụọ nile nke ndị nwụrụ anwụ mgbe arụ ya tọgbọ n’ime ili, nke Onye-isi nduzi Smith nwetara n’ụbọchị gara-aga. E depụtara ya otu mgbe ahụ na-eso mmechi ọgbakọ ahụ. Na 31 Oktoba 1918, Onye-isi nduzi Smith wepụtara ya n’iru ndị ndụmọdụ nke Otu Ndị-isi Nduzi Mbụ, Kansụl nke Iri na Abụọ ahụ, na Onye isi ezi na ụlọ, na ha nile jiri otu olu nabata ha.
N’ihi na ndị nta-akụkọ ezipụwori akwụkwọ akụkọ n’ihi ndọrọ ndọrọ ọchịchị site na Salt Lake City, nke a gbasaworo mbara, nke mere na òtù na-elekọta ntuli-aka ọchịchị na Utah, n’ime ndepụta mkpesa ha na nso a nye ode-akwụkwọ nke ime obodo, na-ekwusi-ike na ịlụ ọtụtụ nwunye ka a na emere emume-nsọ ruo ugbụ a ma n’alụlụ di na nwunye iri anọ dị otua ka a haziworo na Utah ke mgbe Jun gara-aga ma-ọbụ n’ime afọ gara-aga, ọzọ kwa na mkparịta-ụka nile n’ọha, ndị ndu nile nke Nzukọ-nsọ akụziwo, nyewokwa agbam-ume, na kwado ọgan’iru nke emume alụlụ karịrị otu nwunye—
Na 30 Septemba 1978, n’oge Ọgbakọ Ntụgharịkọta uche ọha nke mpaghara afọ 148 nke Nzukọ nke Jisụs Kraịst nke Ndị-nsọ Ụbọchị-Ikpeazụ a, Onye-isi nduzi N. Eldon Tanner, Onye ndụmọdụ nke Mbụ nke Otu Ndị-isi Nduzi Mbụ nke Nzukọ-nsọ wepụtara ihe ndị a na-eso: